A ga-eme ihe ngosi Canton 127th na ntanetị n'etiti etiti na etiti June
Dabere na Council obodo China onye isi nzuko na Eprel, 7th, 2020, megide ọnọdụ ọrịa zuru ụwa ọnụ, nzukọ a kpebiri, nke 127th Canton Fair emere na ntanetị rue mbubreyo June kpọọ ngwaahịa ngosipụta dị n'ụlọ na mba ofesi, na iji teknụzụ ozi dị elu, na-enye ntanetị awa iri abụọ na anọ maka ọrụ docking dị ka mkparịta ụka n'ịntanetị, na-eme ka ngwongwo ahia dị elu n'ịntanetị dị elu, na-enye iwu site na Ndị ọchụnta ego ụlọ na ndị mba ọzọ anaghị ahapụ ụlọ gaa ahịa.
N’ehihie nke Eprel 23, minista na-ahụ maka azụmahịa nwere nzukọ akụkọ ntanetị oge niile, onye nnọchi anya onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka azụmaahịa na-ekwuchitere azụmaahịa gao feng zara ndị nta akụkọ na ndị nta akụkọ na ntanetị banyere intaneti. Canton Fair oge kpebisiri ike, oge akwadebe bụ oge ọrụ, kedu ka ọganihu na ngosipụta na nkwalite nke ndị na-azụ ahịa?
Dabere na njirimara nke nke 127th Canton Fair ejidere na Internetntanetị, anyị amalitela ọrụ nke na-adọta ego na ihe ngosi. Ka ọ dị ugbu a, ngosi a na-aga n’ihu nke ọma, na-elekwasị anya ikpuchi ụwa niile, zigakwaara ndị ahịa ihe karịrị 400,000 ndị bịara ụlọ ahịa ahụ akwụkwọ ịkpọ òkù ahụ.Ọrụ ngosi a ga-arụkwa nnukwu ego na-adọrọ adọrọ site n'aka ndị mmekọ mba ofesi. Canton mma , dị ka nnukwu ụlọ ọrụ mba na ụlọ ọrụ azụmaahịa, ụlọ ọrụ ịzụ ahịa dị iche iche, wdg. Site na ọwa dị iche iche, na-eme ka ikpo oku na-enweghị ike ịga. Canton Fair n'oge gara aga n'ihi oge ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, dị ka ụgwọ njem enweghị ike ịnọ na nzukọ ahụ, mgbalị iji na-adọta ndị ọzọ na-azụta ihe na-abịa, na-enye iwu kwupụtara ahịa ịmepụta ọnọdụ dị mma maka ụlọ ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-abawanye ike nke òkù ndị na-azụ ụlọ, mụbaa, ọnụ ọgụgụ ndị ọkachamara na-azụ ahịa ịkpọ òkù, gbasaa mbubata mbubata, kwalite ịkwalite ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi.
N'okwu nke na-elekwasị anya n'oge ahụ, ihe ngosi B2B bụ ọrụ dị mkpa site na obere oge gosipụta ozi ịta, akụrụngwa niile, jikọta, Canton Fair ejidere na ntinye aka na ntanetị na ntanetị ga-echekwa njirimara na uru, iri puku kwuru puku ndị na-azụ ahịa na ndị na-egosi ya n’ime ụbọchị iri na elu mgbanwe mgbanwe ugboro ugboro, ha abụọ bara uru na onye zụrụ ahịa otu nkwụsị, nwekwara ike inyere ndị ngosi ahụ aka ka ha bulie ya elu. atụmatụ azụmaahịa, ndị na-azụ ahịa chọrọ ego maka nchịkọta ozi, akụkụ abụọ ahụ nwere ike ịbụ otu dị ka afọ ma ọ bụ karịa oge oge ịzụta ma ọ bụ atụmatụ mmepụta na atụmatụ ọrụ. Site n'echiche nke ndị na-eme ihe ngosi, ijigide ihe ngosi ahụ n'ime obere oge bụ ihe na-eme ka ị na-akpọ ndị na-azụ ihe zuru ụwa ọnụ ka ha sonye na ngosi ahụ, na-eme ka a na-elebara anya, na-agbasawanye nkwukọrịta, ma na-eweta ohere azụmahịa maka mkparịta ụka na imekọ ihe ọnụ na ndị na-egosi ihe ngosi ahụ.
Afọ a Canton Fair ga-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya sie ike n'ịntanetị, nye ezigbo nkọwa gbasara ihe abụọ a, ma mekwaa ka usoro mkparịta ụka azụmahịa nke ntụkwasị obi dị n'etiti ha abụọ. Nye nkwado nkwado ọtụtụ asụsụ maka ikpo okwu iji dozie nkwukọrịta n'etiti ndị na-azụ ihe na ndị na-egosi ihe ngosi. Maka nke ọ bụla n’ime ndị ngosi a hibere ụlọ mgbasa ozi ga-anọ awa iri abụọ n’ịntanetị, ịnwere ike ihu na mkparịta ụka ihu na ihu, ị nwekwara ike mebe ọha.
Oge nzipu ozi: Mee-06-2020